Olee otú Hichapụ Files, System Nhọrọ, ngwa ọdịnala na iPhone
Nkuzi maka Olee otú iji Hichapụ SMS, Photos, égwu, System Nhọrọ na ndị ọzọ Files na iPhone
2. Nhichapụ Ozi
2.1 Hichapụ iPhone SMS
2.2 Nhichapụ mgbakwunye
Ma gụọ 2.3 Hichapụ iMessage
2.4 Hichapụ Twitter
2.5 Hichapụ Facebook
2.6 Hichapụ WhatsApp
3. Hichapụ iPhone Photos
3.1 Nhichapụ Igwefoto Roll
3.2 Hichapụ Photo Album
3.3 Hichapụ Photo Library
4. Hichapụ iPhone Music
4.1 Nhichapụ Songs
4.2 Hichapụ Playlist
4.3 Hichapụ Pọdkastị
4.4 Nhichapụ Audiobooks
5. Hichapụ iPhone Videos
5.1 Hichapụ iPhone Videos
5.2 Nhichapụ Movies
6. Hichapụ iPhone égwu
6.1 Nhichapụ App icon
6.2 Nhichapụ App Data
6.3 Hichapụ iPhone égwu
6.4 Nhichapụ ọdụ akwụkwọ akụkọ
7. Hichapụ System Option
7.1 Hichapụ iPhone Okwey
7.2 Nhichapụ Paswọdu
7.3 Nhichapụ Mmachibido
8. Hichapụ ndị ọzọ faịlụ
8.1 Nhichapụ Mail
8.2 Nhichapụ oziolu
8.3 Nhichapụ Kalinda
8.4 Hichapụ Voice Memo
8.5 Hichapụ Notes
8.6 Hichapụ Bookmark
8.7 Nhichapụ Nchọgharị History
8.8 Nhichapụ Nchọgharị Kuki
8.9 Nhichapụ iOS ndabere
Okwu Mmalite maka otú ka ihichapụ ihe on iPhone
Ọ bụ nkịtị maka iPhone ọrụ ka ihichapụ ihe si iPhone, ma onwe elu ohere ma ọ bụ nanị wepụ ihe na-achọghị. Otú ọ dị, o yiri ọ bụ nnọọ mfe iji wụnye ngwa, izipu ozi, na-ese foto, kpọọ vidiyo na songs karịa Nhichapụ ngwa, ozi, photos, videos, songs, ndị ọzọ faịlụ na faịlụ caches on iPhone. Foruntately, site okodu sekọnd ole na ole na onye ọ bụla nkuzi na isiokwu a, ị nwere ike ihichapụ ihe ị chọrọ. Isiokwu a na-agụnye ọtụtụ akụkụ, biko pịa n'akụkụ aka ekpe igodo mmanya ịchọta ọmụma ị chọrọ:
Hichapụ iPhone Ozi: pịa Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji, ị pụrụ ịhụ na ozi eriwo gị iPhone nchekwa. Echegbula! Pịa Hichapụ SMS ma ọ bụ Hichapụ Ozi Mgbakwụnye na ekpe igodo mmanya nyak ohere.
Hichapụ iPhone Photos: ma gị iPhone Igwefoto Roll na-bulged na foto, ma ọ oyiri foto albums adị na gị iPhone, multiple ngwọta na-ẹkenam ke kwekọrọ ekwekọ akụkụ na-agwa gị otú ime ya mfe.
Hichapụ music na vidiyo na iPhone: i nwere ike ihichapụ songs na vidiyo na onwe elu oghere. Otú ọ dị, ọ na-eme mgbe niile na-ehichapụ songs na vidiyo sinanfiputa on iPhone ọzọ na ọzọ. Dozie nsogbu, na ị na o yiri nnọọ ka itinye ụzọ kpọtụrụ aha n'isiokwu a.
Hichapụ iPhone égwu: ma maka ihichapụ ngwa ọdịnala na iPhone, ma ọ bụ wepụ ngwa data mgbe idebe ngwa, i nwere ike ịhụ ndị kasị mma na mfe ụzọ a n'isiokwu a.
Hichapụ iPhone System Nhọrọ: passcode, mgbochi, Okwey, mail, kalenda, ibe edokọbara, wdg-eme ka ọ kama mfe n'ihi na anyị aka ịnọgide na nzuzo ma ọ bụ sọfụ Internet. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike mkpa ịgbanwe ya obere bit. Na nke a, ị ga-mara otú ịgbanwe kwekọrọ ekwekọ ntọala.
Nchọpụta nsogbu maka ihichapụ ihe si iPhone
Ajụjụ # 1: m gbalịrị emeghe ọchịchịrị nchere icon, ma, ọ bụghị na-arụ ọrụ. Na m nwekwara ike na-adịghị ọbụna ihichapụ ha. M na-agbalị idozi nsogbu site ibidogharịa m iPhone na ọ bụghị na-arụ ọrụ kwa. Mgbe m jide akara ngosi na-eme ka ha wigul, e nweghị X na elu nri akuku. Olee otú m idozi nsogbu a?
Azịza: Ọ bụrụ na ụfọdụ ngwa oyiyi na iPhone bụ ọchịchịrị na ichere, ọ pụtara na ndị a ngwa ọdịnala na-enye ume ọhụrụ na background.You nwere ike pịa ekpe igodo mmanya Hichapụ App Oyiyi ịhụ ngwọta.
Ajụjụ # 2: Gịnị na-eme ngwa data mgbe m nwa oge ihichapụ ihe ngwa si ​​iPhone? M chọrọ na-data bụrụ na nke nọ ná mkpa na-eme n'ọdịnihu.
Azịza: Ụfọdụ egwuregwu na-achọ ka gị ike onye akaụntụ, nke a ga-eji zọpụta onwe gị egwuregwu data n'elu ígwé ojii. Na mgbe ị na reinstall ngwa gị iPhone na abanye na na akaụntụ gị, ị nwere ike nweta ihe data azụ. Otú ọ dị, ụfọdụ ngwa data na-adịghị azọpụta na ígwé ojii. Ị ga-eme nkwado ndabere na mpaghara aka. Ego nkọwa site na ịpị ekpe igodo mmanya: Hichapụ ngwa ọdịnala na iPhone
Ajụjụ # 3: E nwere 2 oyiri foto albums na m iPhone. M na-apụghị ịhụ ihe ọ bụla Nhichapụ nhọrọ wepụ otu n'ime ha si m iPhone. Echiche ọ bụla?
Azịza: oyiri foto albums na-synced gị iPhone site iTunes. E nwere ọtụtụ ụzọ ka ihichapụ oyiri ma ọ bụ achọghị foto albums na foto na Photo Library. Lelee ngwọta site na ịpị ekpe igodo mmanya: Hichapụ Photo Albums na Hichapụ Photo Library.
Olee otú Hichapụ Text Ozi na iPhone
Ajụjụ # 1: m na-adịghị ezu ohere na m iPhone, n'ihi ya, ọ ga-ekwe ka m na-eme nkwado ndabere na mpaghara. Ozi ederede were ukwuu nke ya.
Azịza: nke ahụ bụ otú o si arụ ọrụ. Iji jide n'aka na e nwere ohere, ị kwesịrị ị ihichapụ ozi ederede site na gị iPhone mgbe nile. N'ezie, e wezụga ihichapụ dum akakabarede, ị nwere ike ka na-na mkpa otu ozi. Ego otú ka ihichapụ ozi ederede site iPhone.
Ajụjụ # 2: m na-ehichapụ ụfọdụ ederede ozi na m iPhone. Otú ọ dị, na nso nso m chọpụtara na Chakwasa ihie search nwere ike ịhụ ndị a na-ehichapụ ozi ederede. Ozi ederede adịghị n'ezie na-ehichapụ mgbe niile. Olee ka ihichapụ ozi ederede na iPhone na-adịgide adịgide?
Azịza: Ọ bụ eziokwu na mgbe ị ihichapụ SMS ozi ederede na iPhone, ehichapụ ozi ederede adịghị n'ezie arahụ na niile. Ị pụrụ ịhụ ha na search na ị ike naghachi ha si gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihichapụ kpam kpam SMS si iPhone, ị ga-agbalị Wondershare SafeEraser, nke na-enye 3 etoju ka ihichapụ data on iPhone. Mgbe iji ya, ndị a ozi ederede ga-apụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi. Ego otú ka ihichapụ SMS si iPhone na-adịgide adịgide.
Hichapụ SMS si iPhone-adịgide adịgide
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ozi ngwa na iPhone. Pịa Dezie, swipe n'elu a ozi site na ikike hapụrụ na pịa Hichapụ.
Nzọụkwụ 2. Download, wụnye na-agba ọsọ Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Họrọ ihichapu ehichapụ faịlụ na na nche larịị ka ihichapụ faịlụ na Wondershare SafeEraser. Ike iṅomi maka ehichapụ faịlụ gị iPhone.
Nzọụkwụ 4. Tulee Ozi na iMessages na pịa Kwenye ka ihichapụ SMS si gị iPhone-adịgide adịgide.
Olee otú Hichapụ Text Ozi si iPhone
Ihichapụ ihe dum mkparịta ụka
Kpatụ Ozi ngwa gị iPhone n'ụlọ ihuenyo. Na iOS 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, Kpatụ Dezie nhọrọ na n'elu aka ekpe. Kpatụ obere red gburugburu na n'aka ekpe nke a akakabarede na enweta na Nhichapụ nhọrọ na n'akụkụ aka nri. Na iOS 6 ma ọ bụ tupu, chọta akakabarede ị chọrọ ka ihichapụ, swipe ekpe gaa n'aka nri na enweta na Nhichapụ nhọrọ.
Hichapụ Single Text Ozi n'ime a akakabarede
Kpatụ Ozi ngwa gị iPhone. Chọta na-emeghe a mkparịta ụka n'ime nke ị chọrọ ka ihichapụ SMS. Na iOS 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, enweta ma jide on a ozi ruo mgbe a mmapụta egosi. Enweta Ọzọ. Na iOS 6 ma ọ bụ ala, enweta Dezie bọtịnụ na n'elu nri. Na mgbe ahụ ego na-achọghị otu ozi ederede site na ịme ọpịpị gburugburu na n'aka ekpe nke ọ bụla ozi ederede na enweta na ahịhịa biini na ala ka ihichapụ ha si iPhone.
Olee otú Hichapụ Text Ozi Mgbakwụnye on iPhone
Ajụjụ # 1: mgbe m na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji, m na-ahụ na m nwere ihe karịrị 3GB nke ozi. Mgbe m na-hichapụ ozi si m iPhone, e nwere ike ịbụ ya mere ọtụtụ ozi ederede. My enyi m gwara m na ọ bụ ozi Mgbakwụnye na nwere ohere. Olee otú m pụrụ ihichapụ ozi ederede Mgbakwụnye ebe m na-adịghị ọbụna mara ebe ndị ha bụ?
Azịza: ọ bụ a na-enwekarị nsogbu na fọrọ nke nta niile iPhone ọrụ nwere ike na-ezute. Ụfọdụ ọrụ na-ekwu na ha na-ehichapụ niile ozi ederede nanị na-ahụ na ozi ederede ka ogide karịa 2GB ohere. Ka ihichapụ ozi ederede Mgbakwụnye, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na Wi-Fi. Mgbata Ntọala> iCloud, gị banye Apple ID, enweta Nchekwa & Backu p aka iCloud ndabere nhọrọ. Ehichapụkwa ndabere Ugbu a ka NA (mgbe button ebe bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ).
Nzọụkwụ 2. Gaa Ntọala> iCloud, chọta ma gbanyụọ Documents & Data. Mgbata Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Tụgharịa na ndabere Ugbu a.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia na Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala. Na Mbido nnyemaaka, gaba Melite ngwaọrụ gị. Enweta Weghachi si a ndabere. Ịnyagharịa Họrọ ndabere, mgbe ahụ, na-ahọrọ ndị ọhụrụ iCloud ndabere nke ị mere ke Nzọụkwụ 2.
Olee otú Hichapụ iMessage Ozi na Mgbakwụnye
The "Documents & Data" emewo fụrụ akpụ 4.7GB m iPhone, na ọ bụ ihe niile n'ihi iMessage (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọtụtụ narị photos ẹdude n'ime eri. Enwere ụzọ m nwere ike ịzọpụta mkparịta ụka ndị a ma sikrob ha nke oyiyi n'ime ha ? - Sophie
N'ihe banyere onye ọrụ e kwuru n'elu, ngwọta bụ ezigbo mfe. Nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru ka ihichapụ achọghị ozi na Mgbakwụnye na iMessage.
Nzọụkwụ 1. Pịa Ozi na akara ngosi na gị iPhone ikpughe niile akakabarede na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Hichapụ iMessage ozi na ozi Mgbakwụnye: Ka ihichapụ dum akakabarede, ị kwesịrị ị pịa Dezie bọtịnụ na n'elu aka ekpe. Wee pịa obere red gburugburu na n'aka ekpe maka onye ọ bụla akakabarede enyere ndị Nhichapụ nhọrọ na nri. Pịa Hichapụ wepụ dum mkparịta ụka.
Ka ihichapụ akụkụ nke a na-akparịta ụka ma ọ bụ iMessage mgbakwunye, pịa a mkparịta ụka. Ma otu ozi ruo mgbe a mmapụta-egosi. Enweta Ọzọ na enweta na obere gburugburu na ekpe ka ego na-achọghị ozi na iMessage Mgbakwụnye. Pịa na ahịhịa biini ka ihichapụ iMessage ozi na Mgbakwụnye.
Mgbe ihichapụ ihe ndị a, ị nwere ike ịga na-ewepụ iMessage caches:
1.Tap Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Enweta ndabere Ugbu a nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone mbụ.
2.Tap Ntọala> iCloud, gbanyụọ bọtịnụ maka Documents & Data. Mgbata Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> Ndabere Ugbu a nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone enweghị ndabere akwụkwọ na data.
3.Tap Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia na nchicha ọdịnaya niile na ntọala. Melite gị iPhone site na ịme ọpịpị Weghachi si a ndabere. Ịnyagharịa Họrọ ndabere na-ahọrọ ọhụrụ iCloud ndabere iweghachi gị iPhone.
Ajụjụ: M na nso nso nyere iji iPhone. Otú ọ dị, mgbe enyi eji iPhone izipu m ozi, ọ na-akpaghị aka họrọ iMessage dị ka m mobile ọnụ ọgụgụ bụ ezie na m na-adịghị ihe iPhone ọzọ. Enwere ụzọ wepụ nọmba ekwentị m si Apple si iMessage nchekwa data?
Azịza: Gaa My Nkwado Profaịlụ na abanye na. Pịa na Dezie Ngwaahịa na X aka nri nke ngwaahịa. Wee pịa Unregister.
Olee otú Hichapụ Twitter Posts, Direct Ozi na Twitter Accounts
Ajụjụ # 1: na m maara na site ihichapụ Direct Ozi akụkọ ihe mere eme ga-in-n'aka ihichapụ ozi na nnata Direct Ozi Igbe mbata. Otú ọ dị, m hụrụ na nke a na-arụ ọrụ na kọmputa, ma ọ bụghị na iPhone. M na-agbalị ka ihichapụ DM ozi na iPhone, ma ndị a ozi ka e nwere mgbe m na-ite na site na kọmputa.
Azịza: ee, nke ahụ bụ otú twitter arụ ọrụ. Ka ihichapụ Direct Ozi na nnata DM Igbe mbata, ị nwere ike abanye gị twitter na ihichapụ DM site a na kọmputa. Otú ọ dị, ọ na-adịghị arụ ọrụ maka Twitter ngwa na iPhone, nke pụtara na ọ bụrụ na ị ihichapụ DR on iPhone Twitter ngwa Igbe mbata, na ị na-ewepụ ha si gị iPhone, ma ha ka na-adị.
Olee otú Hichapụ Direct Ozi si Twitter ngwa na iPhone
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Twitter ngwa na iPhone ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2. Jide ozi ma ọ bụ akakabarede ị chọrọ ka ihichapụ maka nke abụọ.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Hichapụ ma ọ bụ Hichapụ mkparịta ụka
Ajụjụ # 2: Olee otú ka ihichapụ post mere na twitter na iPhone?
Azịza: enweta na Twitter na akara ngosi na gị iPhone ẹkedori ya. Gaa NchNhr na mgbata Profaịlụ. Chọta na enweta na tweet ị chọrọ ka ihichapụ. Kpatụ ahịhịa nwere ike akara ngosi na ala nke Tweet na a ozi ga-gbapụta na nhọrọ ịkagbu. Enweta Hichapụ Tweet.
Ajụjụ # 3: Olee otú ka ihichapụ m twitter akaụntụ iji twitter iPhone ngwa?
Azịza: na-n'ụzọ doro anya, Twitter adịghị ekwe ka ị kpamkpam hichapụ gị Twitter akaụntụ site na iPhone. Ị pụrụ nanị wepụ na akaụntụ gị iPhone na ihichapụ ya na-adịgide adịgide site na kọmputa gị. Iji deactivate gị Twitter akaụntụ, biko gaa na Twitter Nkwado Center >>. N'okpuru ebe nzọụkwụ bụ maka otú ka ihichapụ a Twitter akaụntụ iPhone.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala ma pịgharịa gaa ala iji chọta Twitter. Enweta na Twitter na mgbe e mesịrị enweta na gị Twitter aha.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Hichapụ Akaụntụ na ala. Na mmapụta elu, gosi nhichapụ site na ịpị Nhichapụ Akaụntụ.
Nzọụkwụ na Hichapụ Facebook App Igbe mbata Ozi na iPhone:
Ụfọdụ mmadụ na-arịọ otú ka ihichapụ Igbe mbata ozi na iPhone Facebook App. N'ezie, iPhone Facebook ngwa enye gị ohere ele gị niile Facebook ozi Igbe mbata, ma ọ dịghị ka ị na-adịgide adịgide ihichapụ ha si Facebook usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ Facebook ozi na-adịgide adịgide, ị kwesịrị ị na-eme ya mgbe e mesịrị site na iji kọmputa gị. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ ka ihichapụ Igbe mbata ozi na iPhone Facebook ngwa:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Facebook ngwa na akara ngosi na gị iPhone ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Ozi na akara ngosi na n'elu ihuenyo na enweta na akakabarede na nke ị na ozi ị chọrọ ka ihichapụ bụ.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ ma jide gị aka na ozi ị chọrọ ka ihichapụ. Na mmapụta, mgbata Hichapụ na mgbata Hichapụ na menu egosi.
Olee otú Hichapụ Whatsapp Chat History
Ọ bụ nnọọ mfe ka ihichapụ WhatsApp ozi ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme si ikori iPhone. Ị nwere ike ihichapụ onye ozi, coversations, ma ọ bụ dum chat akụkọ ihe mere eme site na-eso nzọụkwụ:
Hichapụ otu ozi na-akparịta ụka:
Nzọụkwụ 1. Open WhatsApp na gị iPhone-eme ka n'aka Wi-Fi jikọọ. Mepee akakabarede nke na-agụnye ozi ị na-aga ka ihichapụ.
Nzọụkwụ 2. Pịa Dezie n'elu na ozi ị chọrọ ka ihichapụ. Mgbe ndị ozi na-enyocha, pịa ahịhịa biini na ala.
Ihichapụ ihe dum mkparịta ụka:
Nzọụkwụ 1. Gaa Chats ngalaba. Ehichapụkwa chat si ikike ekpe.
Nzọụkwụ 2. Mgbe Nhichapụ button na-egosi, enweta ya.
Cheta na: ma ọ bụrụ na ị na-etinye otú a ka ihichapụ a otu nkata, ị ga-ewepụ site na otu. Iji zere ọdachi ahụ, na-agbalị iwepụ niile chat akụkọ ihe mere eme site na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Doro Anya niile WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme na iPhone:
Nzọụkwụ 1. Launch WhatsApp na-aga Ntọala. Pịgharịa gaa na ala.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Doro Anya niile mkparịta ụka.
The n'elu kwuru banyere bụ otú ka ihichapụ WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme na mkparịta ụka si iPhone. Ọ bụrụ na ị accidently ihichapụ mkparịta ụka ma ọ bụ dum chat akụkọ ihe mere eme si gị iPhone ma na-achọ ime ka ha azụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS naghachi ehichapụ WhatsApp ikori akụkọ ihe mere eme. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ WhatsApp Chat History permanenlty, pịa ebe a.
Olee otú Naghachi ehichapụ WhatsApp Chat History
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Agba ya na jikọọ na gị iPhone na kọmputa. Ị na-ahụ window n'okpuru ma ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S.
Cheta na: The window maka iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS bụ obere dị iche iche na nke ndị iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S. Ọ dịghị mkpa. Ị dị nnọọ na-eme ka ihe window gwara gị mee ihe
Nzọụkwụ 2. iṅomi iPhone maka WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme
N'ihi na iPhone 5S / 5C / 5 / 4S ọrụ, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi bọtịnụ na omume bụ isi window. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone.
N'ihi na iPhone 4 na iPhone 3GS ọrụ, i kwesịrị iji na-eso ụzọ n'okpuru iji nweta ngwaọrụ scanning mode ike iṅomi ya:
1. Pịa bọtịnụ Malite na window Mgbe ejikọta gị iPhone.
2. Ozugbo enweta na Home na Ike buttons na gị iPhone maka 10 sekọnd.
3. Mgbe 10 sekọnd gafere, ị nwere ike hapụ Ike button, ma ka enweta na Home button ọzọ 15 sekọnd, ruo mgbe ị gwara na ị na-aga nke ọma banyere scanning mode.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud tupu ị ihichapụ WhatsApp ikori akụkọ ihe mere eme, ị nwekwara ike ime WhatsApp ikori akụkọ ihe mere eme mgbake site eme naputa site na iTunes ndabere File ma ọ bụ naputa site na iCloud ndabere File.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme na gị iPhone
N'oge Doppler, ị nwere ike na-amalite na ịhụchalụ hụrụ data na Doppler N'ihi. Na ịpị WhatsApp na n'aka ekpe nke window, ị nwere ike ihuchalu niile hụrụ WhatsApp ikori ndekọ ebe a, nwere chat ọdịnaya, aha, nọmba ekwentị na Mgbakwụnye. Họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi na nne Mmetụta ha. Mgbe ahụ, pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Olee otú Hichapụ WhatsApp Chat History-adịgide adịgide
Ajụjụ: Olee otú ihichapụ kpam kpam m chat akụkọ ihe mere eme na WhatsApp si m iPhone? Di m na-aga na-agbalị naghachi akụkọ ihe mere eme nke m chats na m iPhone. E nwere ụfọdụ mkparịta ụka ihe m na-achọghị ya ịhụ.
Azịza: ihichapụ kpam kpam WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme si iPhone, ị ga-agbalị Wondershare SafeEraser. Mgbe iji ya ihichapu gị iPhone, ọ dịghị software ga-agbake WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme si gị iPhone, ọbụna Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ego otú iji Wondershare SafeErasfer wepụ WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme.
Nzọụkwụ 1. Launch WhatsApp on iPhone, chọta na ihichapụ chat akụkọ ihe mere eme na mbụ.
Nzọụkwụ 2. Download na wụnye Wondershare SafteEraser na kọmputa gị. Agba ya na-eji a dijitalụ USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Ọ ga-egosipụta gị iPhone na ya isi window. Họrọ ihichapu ehichapụ faịlụ na a nche larịị ị na-ahọrọ.
Nzọụkwụ 3. iṅomi gị iPhone na-ahụ na-ehichapụ WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme. Ego ya na pịa Kwenye ka ihichapụ ya si gị iPhone-adịgide adịgide.
Olee otú Hichapụ iPhone Igwefoto Roll
M nwere ihe karịrị 1,000 foto na m iPhone Igwefoto Roll. Ga-amasị m ka ihichapụ niile foto na igwefoto Roll. Olee otú m ihichapụ multiple foto site na Igwefoto Roll?
E nwere ihu ọma 3 ụzọ ka ihichapụ Photos na iPhone Igwefoto Roll. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ foto site na iPhone Igwefoto Roll permanetly, ị kwesịrị ị na-agbalị Ngwọta 1. Ngwọta 2 na Ngwọta 3-agwa otú ka ihichapụ foto site na iPhone Igwefoto Roll. Otú ọ dị, ha na-eme ka ndị a photos apụghị ịhụ anya. Ndị a Nhichapụ photos adị ebe gị iPhone na ike ga-natara na a ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS. Họrọ usoro nke ahụ dị mma n'ihi unu:
Ngwọta 1: Hichapụ iPhone Igwefoto Roll Photos-adịgide adịgide. Ngwọta 2: Hichapụ Photos si iPhone Igwefoto Roll on Computer Ngwọta 3: Hichapụ Photos si iPhone Igwefoto Roll Kpọmkwem
Ngwọta 1. Nhichapụ iPhone Igwefoto Roll Photos Permanetly
Mgbe ihichapụ foto site na iPhone Igwefoto Roll, ọtụtụ ndị na ịmaghị foto ndị a na-adịgide adịgide ehichapụ ma ọ bụ. Na-ekwu eziokwu, ọ bụghị. E ehichapụ photos na-ezo ebe gị iPhone na i nwere ike naghachi ha. Ọ bụrụ na ị na-aga na-ere ma ọ bụ na-enye gị iPhone ka a, ị pụrụ iji Wondershare SafeEraser ihichapụ kpam kpam foto na iPhone. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP. Mgbe ahụ, na-agba ya.
Mkpa: Nke a software ga ihichapụ kpam kpam niile data na na ntọala gị na iPhone, na-enweghị ohere nke mgbake. Ime ndabere gị mkpa data Tupu ị na-malitere. Na ị na-atụ aro iji a-atọ ndị ọzọ ndabere ngwá ọrụ dị ka Wondershare TunesGo. iTunes na iCloud adịghị ekwe ka ị selectively weghachi data gị iPhone. Nke ahụ bụ ikwu, sị, na-ehichapụ photos ga-eweghachi gị iPhone ọzọ ma ọ bụrụ na ị họrọ otú a.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Na mgbe ahụ na SafeEraser window, họrọ ihichapu niile data na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Tupu ị pịa Malite bọtịnụ, họrọ larịị nke data Ihichapụ: Akwa, Ọkara ma ọ bụ ala. Ma ọ bụ i nwere ike ịnọ na ndabere otu (Ọkara). N'ezie, ọ bụ na-atụ aro otu. Wee pịa Malite bọtịnụ na-amalite ihichapụ foto gị iPhone ugbu a.
Solution2: Hichapụ Photos si iPhone Igwefoto Roll on Computer
Hichapụ iPhone Igwefoto Roll on Windows PC
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na gị Windows PC site eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Open "My Computer" na ị ga-ahụ na gị Windows PC gị ndị iPhone dị ka ihe mpụga ike mbanye.
Nzọụkwụ 3. Pịa emeghe nchekwa maka gị iPhone na-ahụ foto na iPhone Igwefoto Roll. Họrọ achọghị foto na iPhone Igwefoto Roll na pịa Hichapụ isi ihe na-ewepụ ha.
Hichapụ iPhone Igwefoto Roll on Mac
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB;
Nzọụkwụ 2. Launch Image Capture, Preview, ma ọ bụ iPhoto. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ngwa bụ, na-eji Chakwasa ihie n'elu nri ịchọ ya.
Nzọụkwụ 3. Site na ndabara, ngwa ga-chọpụta gị iPhone na-egosipụta na foto niile na iPhone Igwefoto Roll. Họrọ achọghị ndị na pịa Nhichapụ icon ka ihichapụ ha ma ọ bụ mbubata ha na gị na Mac. Mgbe ị na-ahọrọ Import, na a ga-ozi na-arịọ gị ka ihichapụ niile họrọ foto ma ọ bụ ọ bụghị mgbe importing ha ka ha na kọmputa.
Solution3: Hichapụ Photos si iPhone Igwefoto Roll Kpọmkwem
Nzọụkwụ 1. Kpatụ icon Photos na gị iPhone;
Nzọụkwụ 2. Pịa Albums na ala nke gị iPhone window. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ igwefoto Roll.
Nzọụkwụ 3. Click Igwefoto Roll ikpughe foto niile. Họrọ otu foto na enweta na ahịhịa biini na ala ziri ezi.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na gị iPhone na-agba na iOS 6 na mbụ nsụgharị, ị nwere ike enweta Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji. Si ebe a, enweta Photos na ihichapụ ha niile.
Olee otú Hichapụ Photo Albums on iPhone
Ajụjụ # 1: m ugbu a iPhone e cloned si m ochie ekwentị. Na nke a, foto m na-duplicated. Olee otú m pụrụ ihichapụ album iPhone Photos? M gbalịrị ekpocha onye foto ma chọta ihe nhọrọ ọ bụla na-ekwe ka Nhichapụ. M na-ahụ na ọ dịghị ụzọ ka ihichapụ dum album.
Azịza: Ọ bụrụ na foto albums ị chọrọ ka ihichapụ na-synced ka iPhone site iTunes, e nweghị Nhichapụ nhọrọ na gị iPhone. I nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) ka ihichapụ iPhone foto albums rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụ ịtọ gị iTunes bụghị syncing na gị iPhone.
Ajụjụ # 2: m na weghaara ụfọdụ foto na m iPhone. Iji jikwaa ha, m idozi ha na foto albums. Ugbu a, m chọrọ ka ihichapụ ndị a foto albums, otú m nwere ike ime ya?
Azịza: Ọ bụrụ na ị kere foto albums aka na gị iPhone, ị nwekwara ike ihichapụ ha si gị iPhone: Kpatụ Photos na akara ngosi na gị iPhone> mgbata Dezie. Mgbe a red gburugburu na-egosi na n'aka ekpe nke a foto album, pịa ya. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ Nhichapụ nhọrọ na n'akụkụ aka nri.
Hichapụ Photo Albums na Wondershare TunesGo
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) na kọmputa gị;
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na gị iPhone eriri USB na ẹkedori Wondershare TunesGo.
Nzọụkwụ 3. Click Photos na ekpe ndekọ osisi. Na, na, nri pịa foto album ị chọrọ ka ihichapụ. Na ndọpụta ndepụta, pịa Hichapụ.
Hichapụ Photo Albums site Isetịpụ iTunes mmekọrịta
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na gị iPhone eriri USB na ẹkedori iTunes.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone n'okpuru Ngwaọrụ. Na nri window, pịa Photos. Uncheck mmekọrịta. Mgbe a mmapụta elu-ajụ gị iji wepu ma ọ na-photos, pịa Wepụ Photos.
Hichapụ Photos na iPhone Photo Library
M synced a nchekwa nke ihe oyiyi m iPhone nke na-abịa dị ka abụọ na nchekwa m iPhone, onye na-aha dị ka Photo Library. Enwere m ike ihichapụ Photo Library on iPhone? Biko nyere.
Photo Library bụ ebe na gị iPhone ịzọpụta photos na ị na synced na kọmputa gị. Ka ihichapụ Photo Library, ị naanị abụọ nhọrọ: ihichapụ iPhone Photo Library na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ ma ọ bụ hichapụ Photo Library on iPhone na iTunes.
Ngwọta 1: Hichapụ iPhone Photo Library na Wondershare TunesGo
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo, ihe iPhone njikwa, na kọmputa gị. Na-agba ọsọ ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa gị site na eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Click Photos na sidebar. Chọta na-emeghe Photo Library. Họrọ achọghị photos na pịa Hichapụ.
Ngwọta 2: Hichapụ Photo Library on iPhone na iTunes
M kwuru n'elu na Photo Library bụ na ebe iPhone na-echekwa photos na ị na synced site iTunes. Iji kachapụ Photo Library si iPhone, unu ga-esunye iTunes mmekọrịta.
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes na pịa View> Gosi sidebar.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na iPhone eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Pịa gị iPhone na ngwaọrụ ebe. N'akụkụ aka nri, pịa Photos. Uncheck mmekọrịta nhọrọ. Na mgbe ahụ na ọhụrụ mmapụta, pịa Wepụ Photos.
Mfe nzọụkwụ iji Hichapụ Songs on iPhone Iji aka
Nzọụkwụ 1. Click Music na akara ngosi na iPhone Home ihuenyo ẹkedori ya.
Sep 2. Pịa Songs na ala. Swipe n'elu a song si ikike ekpe ma pịa Hichapụ.
Q & A maka maka Ihichapụ Songs si iPhone
Ajụjụ # 1: mgbe upgrading, ya anya ka m nwere ihe songs na m iPhone karịa m tụrụ anya ya. Ọtụtụ n'ime ha nwere dị ka onye na iCloud akara, na-agwa m na ha na downloadable. M na-agbalị ka ihichapụ ha, ma m nwere ike. Bụla ga-ekwu?
Azịza: ka ihichapụ ndị a downloadable songs si gị iPhone, ị kwesịrị ị na pịa Ntọala> Egwu> na Toggle anya Gosi All Music. Site n'ime nke a, ọtụtụ n'ime ha ga-pụọ. Ka ihichapụ songs na ị na ebudatara gị iPhone, na-emeghe Music, swipe n'elu a song ị chọrọ ka ihichapụ si ikike ekpe ma pịa Hichapụ.
Ajụjụ # 2: onwe elu m iPhone ohere, m na-ehichapụ ụfọdụ songs si m iPhone otu-site na otu. Otú ọ dị, mgbe m ejikọrọ m iPhone na kọmputa m, niile songs wee laghachi m iPhone ọzọ. Na m chọrọ ịmara ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla dozie nsogbu.
Azịza: n'ihi na n'aka, mgbe ị ihichapụ songs aka si iPhone, ị na-ekwesịghị jikọọ gị iPhone na kọmputa gị ọzọ. Ọ bụrụ na ejikọrọ, iTunes ga mmekọrịta ndị a songs na ị na-ehichapụ gị iPhone ọzọ. E nweghị họrọ nhọrọ maka onye songs na iTunes ka mmekọrịta gị iPhone. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na ọ bụ ike ka ị na-iPhone unconnected na kọmputa gị, i nwere ike na-agbalị a:
Nzọụkwụ 1. Uncheck mmekọrịta Music na iTunes
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Ẹkedori iTunes na uncheck mmekọrịta Music nhọrọ ke iTunes. A mmapụta ga-agwa gị na ndị niile na ẹdude songs na listi ọkpụkpọ na iPhone ga-ewepụ. Pịa Wepụ kwụsịkwanụ iTunes.
Nzọụkwụ 2. Wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị
Download Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) awụnyere na kọmputa gị. Site na ndabara, software ga chọpụta gị iPhone na-egosipụta ya na isi window.
Nzọụkwụ 3. Import chọrọ songs gị iPhone
Pịa Music na ekpe sidebar. Wee pịa triangle maka Add n'elu. Họrọ Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa na-agagharị na gị na kọmputa maka songs gị mkpa ma mbubata ha gị iPhone.
Olee otú Hichapụ listi ọkpụkpọ site na iPhone
Kpatụ Music ngwa na akara ngosi na iPhone> Kpatụ Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ala nke window> Swipe n'elu a playlist si ikike hapụrụ> Pịa Hichapụ.
Ajụjụ # 1: otú ka ihichapụ songs si m playlist na music ngwa na iPhone?
Azịza: mgbata Music ngwa na akara ngosi> mgbata Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ala nke window> enweta na playlist nke na-agụnye songs ị chọrọ ka ihichapụ> ịchọta song na swipe n'elu si ikike hapụrụ> mgbata wepụ.
Ajụjụ # 2: o yiri ka ndị swiping si ikike hapụrụ na iPhone ọ bụghị mgbe nile na-arụ ọrụ ezie na. Ụfọdụ m listi ọkpụkpọ, enweghị m ike ihichapụ ha kpọmkwem site iPhone.
Azịza: ka ihichapụ ụdị listi ọkpụkpọ na gị iPhone, ị kwesịrị ị na jikọọ gị iPhone gị na kọmputa, na-agbalị ka mmekọrịta gị iPhone na iTunes ọzọ. Tupu syncing music, ị na-ekwesịghị họrọ ka mmekọrịta dum music n'ọbá akwụkwọ, ma họrọ nka, listi ọkpụkpọ, Genres, wdg Ma mgbe ahụ ego na playlist ị chọrọ ịnọgide na n'ihi na gị iPhone na pịa Mee.
Olee otú Hichapụ Pọdkastị on iPhone
Ajụjụ # 1: otú ka ihichapụ Podcast ngosipụta si iPhone? M mkpa onwe elu m iPhone ohere site ihichapụ ochie Podcast ngosipụta.
Azịza: igba egbe Pọdkastị ngwa na Home ihuenyo na gị iPhone> enweta My Pọdkastị na ala nke ihuenyo> enweta Podcast nke na-agụnye ngosipụta ị na-aga ka ihichapụ> swipe gafee na nwunye aha si ikike hapụrụ> mgbata Hichapụ.
Ajụjụ # 2: m ehichapụ a ọnụ ọgụgụ nke pọdkastị na m iPhone na ihichapụ ha si iTunes kwa. Otú ọ dị, utu aha nke pọdkastị ka na-ekpe na m iPhone. M gbalịrị ihe niile ka ihichapụ ndị a Podcast utu aha, ma ọ dịghị Nhichapụ nhọrọ.
Azịza: ọtụtụ ndị mkpesa na mgbe ihichapụ na ịkagbu ihe dum Podcast on iPhone, Podcast icon ka na-anọgide. Ok, n'ezie, e nwere otu Dezie bọtịnụ nke na-adịghị otú o doro anya na anya na iPhone n'ihi na ị na-ewepụ Podcast utu aha / oyiyi. Kpatụ Podcast ngwa na iPhone ẹkedori ya. Lee niile Podcast utu aha (oyiyi) na Store button bụ na n'elu aka ekpe? Ukwu ahụ. Na-etinye gị na mkpịsị aka na ihuenyo na swipe ekwesị si n'elu na ala. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ Dezie bọtịnụ nke dị na akara na Search na ngosi anya, pịa ya aka Nhichapụ nhọrọ.
Olee otú Hichapụ Audiobooks on iPhone
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ị chọrọ ka ihichapụ niile audiobooks apụ ha iPhone, ma ike chepụta otú. Ụfọdụ mmadụ na-gbalịrị ka ihichapụ ndị a audiobooks na iTunes mbụ na synced iPhone na iTunes mgbe e mesịrị. Otú ọ dị, ọ bụghị na-arụ ọrụ. Na nke a, i nwere ike na-amasị na-agbalị otú a:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji ịchọta Music ngwa na Nchekwa ebe. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ ndị Music ngwa, biko pịa Gosi niile égwu.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Music na mgbe ahụ, ị nwere ike pịa Dezie button na elu n'akụkụ aka nri. Pịa Dezie button na họrọ audiobooks na ị chọrọ ka ihichapụ.
Olee otú Hichapụ Videos si iPhone
N'ozuzu ekwu okwu, ọ bụ nnọọ mfe ka ihichapụ vidiyo si na iPhone. Ọ na-ewe gị ole na ole sekọnd na 2 mfe nzọụkwụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Videos ngwa na iPhone na-agba ọsọ ya.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Dezie bọtịnụ na mgbago mgbago aka nri ma họrọ videos ka ihichapụ on iPhone.
Ajụjụ # 1: m nwere nchekwa na photos aha dị ka Videos nke e dere niile ochie videos m na iwere tupu iOS 7 nweta nkwalite. M nwere ike na-ele na họrọ ha, ma ike ihichapụ vidiyo si na iPhone ebe ọ bụ na ahịhịa biini na-grayed si.
Azịza: videos ikodu ke Photos na gị iPhone apụghị-ehichapụ ukwuu n'ime n'ihi na ha bụ videos synced si gị iTunes. Ma, ị nwere ike ihichapụ ha mfe. Ka ihichapụ ụdị videos, dị nnọọ jikọọ gị iPhone na kọmputa na ẹkedori iTunes. Pịa gị iPhone na iTunes na pịa Photos taabụ na n'akụkụ aka nri. Uncheck mmekọrịta Photos. Site n'ime nke a, a mmapụta elu ga-apụta, na-agwa gị na foto niile na gị iPhone ga-ewepụ, pịa Wepụ.
Olee otú Hichapụ Movies si iPhone
Na-agwụnarị m nke na ebe nchekwa na m iPhone na chọrọ iji wepụ ihe nkiri m nwere na ya. M chọrọ enyemaka. -Jems
Ihu ọma, e nwere ụzọ abụọ ka ihichapụ fim iPhone: ihichapụ fim na na iPhone na-eji iTunes mmekọrịta ka ihichapụ fim iPhone.
Hichapụ Movies Kpọmkwem on iPhone:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Videos ngwa na iPhone na-agba ọsọ ya;
Nzọụkwụ 2. Chọta nkiri ị chọrọ ka ihichapụ si iPhone na swipe aha si ikike fọduru;
Nzọụkwụ 3.Click uhie Nhichapụ bọtịnụ na n'akụkụ aka nri nke video.
Pro: mfe na mfe; Con: otú a nanị deletes fim gị iPhone. Oge ọzọ, mgbe ị mmekọrịta gị iPhone na gị iTunes Library, videos ga-synced gị iPhone ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akwụ ụgwọ na mmasị ka ihe a na-synced;
Gbalịa iTunes iji Hichapụ Movies si iPhone:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na ẹkedori iTunes
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone na NGWAỌRỤ ebe. N'akụkụ aka nri, pịa Movies;
Nzọụkwụ 3. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ fim nile na gị iPhone, ị kwesịrị ị na uncheck mmekọrịta Movies ma na-etinye iwu. Na ịdọ aka ná ntị mmapụta wepụ fim, họrọ Wepụ. Ọ bụrụ na ị na mkpa ka ihichapụ ọtụtụ nkiri na gị iPhone, ị nwere ike ịlele mmekọrịta Movies na họrọ fim ị chọrọ ịnọgide na-gị iPhone. Pịa mmekọrịta.
Pro: a quicker ụzọ ka ihichapụ multiple videos; Con: mkpa ị jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB;
App oyiyi dị nnọọ rapaara na iPhone, e nweghị nzaghachi. Olee ka ihichapụ eji oyiyi na ala nke ihuenyo? M na-abụọ mgbata n'ụlọ button ịkwụsị ya. Right now o yiri ọ naghị arụ ọrụ.
Nzọụkwụ na Hichapụ App Oyiyi na iPhone:
Nzọụkwụ 1. Ugboro abụọ Kpatụ Home button na-egosi multi-ọrụ echiche n'ihi na nso nso-eji ngwa.
Nzọụkwụ 2. kpatụ aka gaa na elu na peeji nke ọ bụla ngwa na akara ngosi na peeji nke ga-ofufe pụọ na ngwa na akara ngosi ga-akwụsị. Kwụsịkwanụ na ngwa ọdịnala site na-eme otú a.
Mere ụfọdụ iPhone ngwa oyiyi bụ ọchịchịrị?
Azịza: Ụfọdụ ngwa oyiyi bụ ọchịchịrị ma ọ bụ na-eche, na-anọkarịrị n'ihi na ndị a ngwa ọdịnala na-enye ume ọhụrụ na ndabere. Ọ bụrụ na ndị tuondu na-adịghị okokụre ruru ka netwọk nke ma ọ bụ na e nwere ụfọdụ nsogbu na nwụnye ngwugwu, ị kwesịrị ị na ma reconnect gị iPhone na Wi-Fi, na-aga App ụlọ ahịa na-redownload ndị a ngwa ọdịnala ma ọ bụ gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Background App Refresh gbanyụọ tuondu maka onye ọ bụla na-eji ngwa karị.
Olee otú Hichapụ App Data si iPhone
Na-eji ụfọdụ ngwa, data maka ndị a ngwa ọdịnala na-gbakọtara ọzọ na ndị ọzọ dejupụta gị iPhone diski ike. Onwe elu gị iPhone, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru ka ihichapụ App data on iPhone:
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye iFunbox na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na-emeghe iFunbox.
Nzọụkwụ 3. Chọta nke ngwa ị chọrọ ka ihichapụ data n'okpuru User Ngwa. Pịa "+" na n'aka ekpe nke ngwa na pịa Library. Na mgbe ahụ si n'akụkụ aka nri window, ị pụrụ ịhụ a nchekwa aha dị ka Cache. Emeghe ya ma hichapụ ihe niile dị n'ime ya.
Ngwọta 1: Hichapụ ngwa ọdịnala na iPhone Iji aka
Nzọụkwụ 1. Kpatụ otu n'ime ngwa ọdịnala na gị iPhone ole na ole sekọnd ruo mgbe ị na-ahụ niile ngwa wigul.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ obere "X" na elu-akuku nke ihe ngwa. Mgbe ozi maka ihichapụ a ngwa-egosi, pịa Hichapụ ka ihichapụ ngwa si ​​gị iPhone.
Cheta na: a bụ ụkpụrụ ụzọ ka ihichapụ ngwa site iPhone. Ezie na ị ihichapụ ha, n'ezie ndị a ngwa ọdịnala ka nọ ebe gị iPhone. Ị nwere ike iji a mgbake ngwá ọrụ na-agbake ha si gị iPhone. Ka ihichapụ iPhone apps na-adịgide adịgide site iPhone, na-agụ ngwọta 2.
Nchọpụta nsogbu maka ihichapụ ngwa site iPhone
Ajụjụ # 1: Mgbe m jide mkpịsị aka m, na-agbalị ka ihichapụ ngwa ọdịnala na iPhone 4, enweghị m ike ịhụ "x" n'ihi na ụfọdụ ụfọdụ nke ngwa.
Azịza: mbụ, biko hụ na ngwa ọdịnala Ị na-agbalị ka ihichapụ si iPhone na-adịghị-eji arụnyere ngwa, nke ike-ehichapụ ezie na ị na-agbalị iweghachi gị iPhone. Ma ọ bụrụ na ha na iso ndị ochie ngwa gị ebudatara gị iPhone, ị kwesịrị ị na pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Mmachibido, hichaa nhọrọ Ihichapụ égwu Gbanye. Na mgbe ahụ laghachi gị iPhone Ihuenyo mbu, pịa otu ngwa ruo mgbe ndị ọzọ ngwa n'ikwe. Pịa "x" ka ihichapụ achọghị ngwa ọdịnala na iPhone.
Ajụjụ # 2: Mgbe m tapped "X" ka ihichapụ ngwa ọdịnala na iPhone na mbo ihu na ihichapụ iwu na ozi, o yiri ihe ọ bụla merenụ. Kedu ihe ọ bụ? The ngwa ọdịnala na m gbalịrị ka ihichapụ niile bụ ọchịchịrị isi awọ na m nwere ike na-adịghị ọbụna rụọ ọrụ ha.
Azịza: Ọ bụrụ na ị rụrụ Ihichapụ na ọ dịghị ihe mere, ị kwesịrị ị na-aga App Store na-agbalị redownload otu ngwa. Kama ịsị Wụnye, ọ pụrụ iyi ka Open. Ihe ọ bụla, pịa ya iji mara na ngwa ọdịnala na gị iPhone ọzọ. Na mgbe e mesịrị, ị nwere ike igosi na ihichapụ iwu ọzọ tufuo iPhone ngwa.
Ajụjụ # 3: m na-agbalịkwa onwe elu ụfọdụ ohere site ihichapụ ụfọdụ ngwa ọdịnala na gị iPhone, ma Ihichapụ bụ temporarily.I chọrọ ịnọgide na-eji ngwa data n'ihi na m nwere ike chọrọ iji ha ụfọdụ ụbọchị. Gịnị ka m ga-eme?
Azịza: Ohaneze, mgbe ị na-ihichapụ ngwa ọdịnala na gị iPhone, ị na-ewepu ngwa data. Nanị ụzọ na-ngwa data bụ ndabere gị iPhone ka iCloud n'ihu gị ihichapụ ngwa. Mgbe gị mkpa ndị data ọzọ, weghachi gị iPhone si iCloud.
Ngwọta 2: Hichapụ All ngwa ọdịnala na iPhone-adịgide adịgide
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ha ihichapụ ngwa ọdịnala na iPhone n'ihi na ha na-aga ka ịgbanwee gaa na a ọhụrụ ekwentị ma na-ere ochie iPhone, na-achọ zere ndị na-ohere ka ngwa ọdịnala. Na nke a, i nwere ike amasị hichapụ ihe niile ngwa nakwa dị ka ndị ọzọ ozi na gị iPhone-adịgide adịgide. Ọ bụrụ otú ahụ, na-agbalị Wondershare SafeEraser. Ọ bụ a desktọọpụ ngwá ọrụ ihichapu ihe niile na gị iPhone, gụnyere ngwa. Na ihe niile ehichapu-apụghị natara ọ bụla ọzọ.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare SafeEraser na gị Windows kọmputa;
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB na ẹkedori Wondershare SafeEraser. Họrọ otu nke 2 ụdị nke data erasing: ihichapu niile data na ngwaọrụ: ihichapu niile data na ntọala na-adịgide adịgide; ihichapu ehichapụ faịlụ: naanị ihichapu ihe ndị a ị na-ehichapụ na gị iPhone; Ka ịhọrọ ụdị, biko mbụ na-agbalị ngwọta 1 ka ihichapụ ngwa site gị iPhone mbụ.
Nzọụkwụ 3. Họrọ otu nke na nche etoju (kpam kpam 3) ka ihichapụ ngwa ọdịnala na gị iPhone na pịa Malite na-amalite.
Olee otú Hichapụ ọdụ akwụkwọ akụkọ
Ọtụtụ ndị na-mkpesa na ha nwere ike ghara ihichapụ ọdụ akwụkwọ akụkọ. Nke ahụ bụ eziokwu. Ezie na anyị nwere ike ghara ihichapụ ọdụ akwụkwọ akụkọ, anyị nwere ike zoo ya ebe na ihuenyo, na ọ dịghị ihe ọzọ ke akpa page. Nke a na-eme ka ọ nnọọ mma n'ihi na ọrụ jikwaa iPhone.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ otu ngwa na gị iPhone ruo mgbe niile ngwa wigul.
Nzọụkwụ 2. ịdọrọ ya ruo ọdụ akwụkwọ akụkọ ka ike a na nchekwa; Ị pụrụ inye a aha na nchekwa.
Nzọụkwụ 3. Mgbe eke nchekwa, ị nwere ike ịdọrọ ndị dị mkpa ngwa si, naanị ahapụ ọdụ akwụkwọ akụkọ ebe a. Na mgbe ahụ ịdọrọ nchekwa a ebiet a peeji nke ị na-adịghị eji.
Olee otú Hichapụ Okwey on iPhone
The kasị n'ọtụtụ ebe na ụzọ ka ihichapụ Okwey si iPhone:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala> General> Okwey.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ obere akara ngosi n'akuku Okwey (iOS 7), ọ bụrụ na gị iPhone na-agba na iOS 6 ma ọ bụ mbụ, ọ kwesịrị a-acha anụnụ anụnụ akụ.
Nzọụkwụ 3. Na nhazi window maka Okwey, ị kwesịrị ị na pịa PPTP taabụ ịhụ ntọala. Na ala, ị pụrụ ịhụ Nhichapụ Okwey nhọrọ. Pịa ya ka ihichapụ Okwey si gị iPhone.
Cheta na: na ụfọdụ ndị na-ekwu na mgbe iwepu Avast, na agbanyụrụ Okwey malitegharia onwe ya na-agba ọsọ batter ala. Iji dozie nsogbu, ị nwere ike ịga Ntọala> Ozuruọnụ> Profaịlụ ..., chọta profaịlụ maka Avast ewepụ ya.
Site n'ụzọ M na-ahụ ụfọdụ ndị ihichapụ Okwey site taping Ntọala> Ozuruọnụ> Profaịlụ ... Swipe n'elu Okwey na Pịa Wepụ ka ihichapụ Okwey. The ẹkenam ụzọ dị iche iche na-akasị n'ihi na nke ntọala maka Okwey. Ụfọdụ ndị mmadụ gbalịrị-atọ ndị ọzọ ngwa mgbe ụfọdụ ndị setịpụrụ Okwey aka.
Olee otú Hichapụ nile di iche iche nke paswọọdụ na iPhone
Olee otú ka Wepụ passcode si gị iPhone
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Touch ID & passcode
Nzọụkwụ 2. Tinye passcode n'ihi na gị iPhone
Nke a bụ otú ka ihichapụ passcode si gị iPhone ma ọ bụrụ na ị maara na passcode. Ọ bụrụ na ị na-echefu passcode n'ihi na gị iPhone, ị kwesịrị ị na-agụ otú Ị kpọghee ekwt gị iPhone mgbe echefu passcode.
Olee otú Hichapụ Zọpụta Safari Okwuntughe on iPhone
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala, pịgharịa gaa na ala iji chọta na enweta Safari ma họrọ Auto Wet
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Doro Anya All na akwado edinam site na ịme ọpịpị Clear AutoFill Data.
Olee otú Hichapụ iCloud Akaụntụ iPhone enweghị Paswọdu
Ụfọdụ ndị na-ekwu na Mmanu iPhone ha zụtara-ejikọta ya na nke mbụ onye ọrụ iCloud akaụntụ. Ka ihichapụ iCloud Akaụntụ iPhone enweghị paswọọdụ, eleghị anya ị pụrụ agbalị a pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala ma ọ bụ i nwere ike ịgbalị Wondershare SafeEraser ịtọ iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ (ndị ọrụ na-eme atụmatụ na-ere ha igwe nwekwara ike -eji nke a ụzọ hichapụ ihe niile data si iPhone iji chebe onwe ozi).
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare SafeEraser
Download na wụnye Wondershare SafeEraser na gị Windows PC. Right ugbu a ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 8.1 / 8/7 / XP / Vista. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na iPhone eriri USB na-agba ọsọ Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ihichapu niile data na ngwaọrụ
Pịa ihichapu niile data na ngwaọrụ. Site na-ahọpụta a, ihe niile data na gị iPhone ga-ehichapu ruo mgbe ebighị ebi, ọ dịghị ohere nke na-agbake ha ọzọ, ọbụna na Wondershare Dr.Fone maka iOS. Na Họrọ LEVE window, họrọ otu nke 3 nche na ọkwa-ihichapu niile data na gị iPhone. Elu larịị na-ike na-atụ aro.
Nzọụkwụ 3. Hichapụ niile data on iPhone
Pịa Malite button na akwado ihe iji ihichapu niile data na gị iPhone. Mgbe gị iPhone-ehichapu kpamkpam, ị ga-enweta a ngwaọrụ ọhụrụ. Mee ya dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ site launching gị iTunes.
Olee otú Hichapụ Mmachibido na iPhone
Ajụjụ # 1: esi agbanyụ Mmachibido maka na ịnweta App Deletion?
Azịza: Mmachibido na iPhone na-setịpụrụ chebe ngwa ọdịnala si na-ehichapụ. Ka ihichapụ ihe mgbochi, mgbata Ntọala> Ozuruọnụ> Mmachibido> Gbanyụọ mmachi na-abanye na paswọọdụ maka mmachi.
Ajụjụ # 2: chefuru mgbochi passcode, ihe m ga-eme?
Azịza: Ọ bụrụ na ị na-na na nanị ụfọdụ ihe na gị iPhone na-echefu ihe mgbochi passcode, ị nwere ike ghara ihichapụ mmachibido passcode dị ka otú ka ihichapụ n'ụlọ ihuenyo passcode, ma ga-eme ka ndị a:
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala> iCloud, banye ma swipe Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Nchetara, Edeturu, na ndị ọzọ na-NA ka mmekọrịta ihe ndị a na-iCloud.
Nzọụkwụ 2. Pịa ma jide Ike bọtịnụ nke gị iPhone ruo mgbe red mmịfe-egosi. Gbanyụọ gị iPhone.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB na ẹkedori iTunes. Pịa ma jide Home bọtịnụ ruo mgbe iTunes echetara gị na ọ achọpụtara a ngwaọrụ Iweghachite mode. Pịa OK na Weghachi iPhone.
Nzọụkwụ 4. Mgbe Iweghachi gị iPhone, a ga-enweghị data na gị iPhone. Na mgbe ahụ ị nwere ike enweta Ntọala> iCloud na gị iPhone, banye ma mekọrịta ihe ị na-na na synced ka iCloud ke nzọụkwụ 1 gị iPhone, karịsịa kọntaktị.
Olee otú Hichapụ Mail na iPhone
Olee otú Hichapụ Email ndekọ na iPhone
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda
Nzọụkwụ 2. Kpatụ email akaụntụ na ị chọrọ ka ihichapụ on iPhone na enweta Hichapụ Akaụntụ na ala.
Olee otú Hichapụ Email na Igbe mbata na iPhone
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Mail ngwa na akara ngosi na gị iPhone ịhụ ihe niile ozi email;
Nzọụkwụ 2. Pịa Dezie button na elu nri akuku.
Nzọụkwụ 3. Tulee achọghị ozi ịntanetị site taping obere gburugburu na n'aka ekpe nke email na aha ma pịa Paghaa na ala. Na mmapụta, enweta Mkpofu.
Nzọụkwụ 4. Laghachi mbụ window maka Igbe mbata mail ebe niile ozi ịntanetị ụzọ ọpụpụ na mgbata igbe akwụkwọ ozi dị. Enweta akaụntụ email na nke ị na-na na na-ehichapụ ozi ịntanetị na Nzọụkwụ 3. Kpatụ Mkpofu na pịa Dezie. Ego ozi ịntanetị na ị na-etinye na ahịhịa biini. Enweta Hichapụ na ala.
Cheta na: ọ dịghị "hichapụ ihe niile" nhọrọ, na nke a, ma ọ bụrụ na ị na-aga ka ihichapụ niile ma ọ bụ multiple ozi ịntanetị (ozi na email) si gị iPhone, ị kwesịrị ị na-eme ya site n'inyocha ọ bụla email. Ịkpachara anya, ezie na ndị a ozi ịntanetị na-ehichapụ si gị iPhone, ha ka na-adị ebe gị iPhone. Ha nwere ike natara na a ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụrụ na ị accidently ehichapụ email na iPhone, na-agbalị iji naghachi ya Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ozi ịntanetị na iPhone na-adịgide adịgide, na-agbalị Wondershare SafeEraser ihichapu ehichapụ faịlụ.
Olee otú Hichapụ oziolu on iPhone
Nzọụkwụ 1. Kpatụ ekwentị ngwa na iPhone Home ihuenyo na enweta oziolu;
Nzọụkwụ 2. Swipe n'elu a ozi site na ikike hapụrụ ikpughe Nhichapụ button;
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nhichapụ button ka ihichapụ oziolu ozi.
E nwere ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na-ehichapụ oziolu sinanfiputa on iPhone. N'ezie, mgbe ị na aka ihichapụ ha si iPhone, na ha na ka na gị iPhone ma-adịghị ahụ anya na i nwere ike naghachi ndị ehichapụ oziolu ozi. Nanị ụzọ ka ihichapụ oziolu na-adịgide adịgide bụ ịchọta a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka, dị ka Wondershare SafeEraser. N'okpuru ebe a bụ zuru ezu nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Nhichapụ oziolu ozi aka
Mgbata ekwentị ngwa> Ozi olu. Swipe n'elu a ozi hapụrụ na pịa nyeere Nhichapụ bọtịnụ na iPhone.
Nzọụkwụ 2. Download Wondershare SafeEraser
Download, wụnye na-agba ọsọ Wondershare SafeEraser na gị Windows PC. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Wondershare SafeEraser ga chọpụta gị iPhone. Si ebe a, ị ga-ahọrọ ihichapu ehichapụ faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Họrọ nche larịị na ike iṅomi iPhone
Họrọ a nche larịị ka ihichapụ Ozi olu. Elu larịị na-ike na-atụ aro. Wee pịa Malite ike iṅomi gị iPhone maka ehichapụ Voice Mail.
Nzọụkwụ 4. Hichapụ oziolu ruo mgbe ebighị ebi
Mgbe ịgụ isiokwu gị iPhone, Wondershare SafeEraser ga-egosipụta niile ehichapụ faịlụ gị iPhone. Ị na mkpa ịhọrọ oziolu ozi. Pịa Kwenye na akwado edinam ka ihichapụ ha si gị iPhone ruo mgbe ebighị ebi.
Olee otú Hichapụ Kalinda on iPhone
Nzọụkwụ 1. Launch na kalenda gị iPhone Home ihuenyo;
Nzọụkwụ 2. Kpatụ kalenda na ala nke ihuenyo
Nzọụkwụ 3. Kpatụ red ọmụma (i) nnọchianya aka nri nke kalenda
Nzọụkwụ 4. Na Dezie Kalinda window, gbadaa na pịa Hichapụ Kalinda
Olee otú Hichapụ Voice Memos on iPhone
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Voice teepu ngwa;
Nzọụkwụ 2. Lelee niile olu memos na ị chọrọ ka ihichapụ;
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nhichapụ nhọrọ.
Nke a bụ ndị nkịtị ụzọ ka ihichapụ Voice Memos on iPhone. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-eme mkpesa na mgbe upgrading iOS, ha hụrụ na-ehichapụ Voice Memos wee azụ ọzọ. Nke a bụ nkịtị, n'ihi na mgbe ị na aka ihichapụ Voice Memos on iPhone, ha ka na-adị na ebe i nwere ike ịhụ na ị nwere ike naghachi ndị a Nhichapụ iPhone Voice Memos. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ Voice Memos on iPhone na-adịgide adịgide (bụghị recoverable), ị ga-agbalị Wondershare SafeErasser ihichapu ha ruo mgbe ebighị ebi site na gị iPhone.
Cheta na: I nwekwara ike na-agbalị ka mmekọrịta iTunes na gị iPhone site unchecking na mmekọrịta Music nhọrọ ka ihichapụ Voice Memos si gị iPhone bụrụ na ndị a Voice Memos ndị na-ama na iTunes Library. Otú ọ dị, ọ pụrụ ime ka Voice Memos na ị na-ehichapụ ga-abịa gị iPhone ọzọ.
Gbalịa Wondershare SafeEraser iji Hichapụ Voice Memos-adịgide adịgide
Nzọụkwụ 1. Hichapụ Voice Memos on iPhone Iji aka
Gbalịa mee ihe ndị mbụ ụzọ ka ihichapụ Voice Memos na gị iPhone mbụ: enweta Voice ọkà okwu ngwa> chọta Voice Memos na ihichapụ ha si gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Wụnye Wondershare SafeEraser
Get Wondershare SafeEraser iji wụnye na gị Windows kọmputa. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. The software ga chọpụta gị iPhone-akpaghị aka. Na isi window, pịa ihichapu ehichapụ faịlụ
Nzọụkwụ 3. Họrọ nche larịị ihichapu ehichapụ Voice Memos
3 nche etoju maka ị ihichapu ihichapụ Voice Memos si iPhone-adịgide adịgide. M atụ aro ka ị na-agbalị elu larịị. Mgbe wee pịa Malite ike iṅomi gị iPhone maka ehichapụ Voice Memos.
Nzọụkwụ 4. Hichapụ Voice Memos si iPhone ruo mgbe ebighị ebi
Mgbe scanning, niile ehichapụ faịlụ na-egosipụta na isi window. Voice Memos na-egosipụta na Private data ebe, ego ya na pịa Kwenye na ala. N'ịkwado edinam na pịa Malite iji wepụ ha si gị iPhone.
Mfe nzọụkwụ iji Hichapụ Notes on iPhone
Nzọụkwụ 1. Pịa Cheta ngwa na iPhone Home ihuenyo;
Nzọụkwụ 2. Swipe n'elu dee aha si ikike hapụrụ aka Hichapụ;
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Hichapụ wepụ Cheta. (Ma ọ bụ i nwere ike enweta ihe edeturu na window maka dee ọdịnaya, enweta na ahịhịa biini.)
Ajụjụ # 1: m iPhone ihichapụ m deturu na-akpaghị aka na ọbụna ana m amaghị ya ruo mgbe m hụrụ na ọ dịghị ndetu na iPhone. Gịnị kpatara nke ahụ?
Azịza: Ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị na Etufuru ndetu na iPhone, ọ bụghị iPhone ihichapụ ha na-akpaghị aka, ma ị mere ya. Eche banyere ma ị wepụrụ email akaụntụ n'ihu ị kwụsịrị ndetu na iPhone. Ndetu gị niile na-metụtara gị mail na akaụntụ. Mgbe ị na-ihichapụ akaụntụ email, i nwere ike ihichapụ ndetu kwa. Ụzọ abụọ iji nweta ndetu azụ: reactive gị mail akaụntụ na gị iPhone ọzọ na naghachi ehichapụ ndetu na iPhone.
Olee otú m ihichapụ Bookmark si m Safari
Nzọụkwụ 1. Launch Safari on iPhone;
Nzọụkwụ 2. Pịa obere akwụkwọ akara ngosi na button;
Nzọụkwụ 3. Pịa Bookmark, swipe gafee a na ibe edokọbara si ikike hapụrụ na enweta na Nhichapụ nhọrọ.
Olee otú Kọwaa Safari Nchọgharị History na iPhone
Nzọụkwụ 1. Launch nchọgharị na weebụ na gị iPhone;
Nzọụkwụ 2. Pịa obere akwụkwọ icon na ala nke ihuenyo;
Nzọụkwụ 3. Kpatụ History, na mgbe ahụ enweta Clear bọtịnụ na ala nri akuku ..
Olee otú iji Hichapụ Kuki na Safari
Nzọụkwụ 1. Click Ntọala> Safari;
Nzọụkwụ 2. Pịgharịa ala, chọta na enweta Doro Anya Kuki na Data;
Nzọụkwụ 3. Kwenye ihe site na ịpị Doro Anya Kuki na Data.
Olee otú Hichapụ Old iOS ndabere File on a Computer
Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iOS ngwaọrụ iTunes, ị nwere ike ihichapụ nkwado ndabere na mpaghara si iTunes ozugbo:
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes na pịa Mmasị menu. On Mac, ọ bụ n'okpuru iTunes menu. On Windows PC, ọ bụ n'okpuru Dezie menu.
Nzọụkwụ 2. Pịa Devices taabụ. Site na ngwaọrụ backups ebe, họrọ ochie iOS ndabere na pịa Hichapụ ndabere na-amalite nhichapụ.
Bides otú a, ị nwekwara ike na-aga na nchekwa ebe ochie iOS ndabere faịlụ adị ka ihichapụ ndabere faịlụ.
Lee ndị ọnọdụ maka ochie iOS ndabere faịlụ na kọmputa:
Mac: ~ / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere /
The "~" na-anọchi gị Home nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ Library n'ụlọ gị nchekwa, jide Option na pịa Go menu.
Windows XP: \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
Windows Vista \_ 7 \_ 8: \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
Olee otú Hichapụ Photos si iPhone
iPhone Obere Ụbọchị mwepụta na Ahịa: News na asịrị
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ SMS, Photos, égwu, System Nhọrọ on iPhone